Maamulka Ahlusunna oo ka hadlay Codaalada ka taagan deegaanada… | TOP NEWS
Maamulka Ahlusunna oo ka hadlay Codaalada ka taagan deegaanada…
Madaxwayne ku-xigeenka maamulka Ahlu-Sunna ee gobolada dhexe Cali Baashi Faarax Cabdullahi ayaa ka warbixiyay dadaalo ay sameeyeen maamulka gobollada dhexe oo ku aadan in ay kala dhex galeen Labo maleeshiyo beeleed oo ay dirir ku dhex martay deegaanka Baanyaale ee Gobolka Hiiraan.
Madaxwayne ku xigeen ayaa ka dhawaajiyay in ciidamo ka tirsan Ahlu-sunna ay kala dhex galeen maleeshiyaadka ay dirirtu dhexmartay, waxa uuna intaasi ku daray in ciidankooda ay ku guulaysteen in ay kala qaadaan maleeshiyaadka, haatan goobta lagu dagaalay ay ku sugan yihiin ciidamada Ahlu-Sunna ee maamulka Gobollada Dhexe.
Cali Baashi ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahanyahay dadaalo dheeri ah iyo farsamooyin kala duwan, si loo hakiyo dhiigga ku daadanaya colaada Tuulada Baanyaaleey oo u dhaw magaalada Maxaas ee Gobolka Hiiraan.
Hadalka madaxwayne ku xigeenka Ahlu-sunna ee maamulka gobollada dhexe Cali Baashi Faarax Cabdullahi ayaa ku soo aadayo xili labo maleeshiyo beeleed ay ku dirireen tuulada Baanyaaleey gobolka Hiiraan, islamarkaana uu sababay dagaalka geerida tiro dad ah oo dhinacyada dagaalamay u badan.
Maamulka Ahlusunna oo ka hadlay Codaalada ka taagan deegaanada… added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 18, 2017